Boosaaso:Faroole oo Xirey Siyaasi Xareed Ciise Cumar | raascasayrmedia.com
← Dibadbax ka dhan ah gooni isu taaga Somaliland oo ka dhacay Sanaag
Wasiirka waxbarashada Puntland oo soo saaray siyaasad ku wajahan waxabarshada Puntland →
Boosaaso:Faroole oo Xirey Siyaasi Xareed Ciise Cumar
Wararka ka imanaya Magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in galabta Boosaaso lagu xirey Siyaasi caana oo kasoo jeeda degaanka Raascasayr State laguna magacaabo Xareed Ciise Cumar oo horey uu ahaa Gudooomiyihii Degmada Caluula.
Waxaa gudoomiyaha xiray ciidamo si gaar ah uga yimi madaxtooyada boosaaso soona amray mr faroole,kadib markii kulan ay wada yeesheen gudi uu ku jirey Siyaasi XareedCiise Cumar iyo Faroole ay isku fahmi waayeen siyaasada degaankaasi.
Mr faroole ayaa amray in la xiro xareed ciise cumar ma cadda sababta dhabta ah ee ka danbaysa xariga xareed ciise,wararka qaar ayaa sheegaya in faroole uu wado olole uu ku caburinaayo siyaasinta degaanka raascsayr state.
Arintan ayaa sii adkaynaysa isfaham la,aanta u Dhaxeysa puntland iyo reer Raascasayr state,waxaa durba xariga siyaasiga canbaareeyay Isimada iyo aqoonyahanda kasoo jeeda degaankaasi.
4 responses to “Boosaaso:Faroole oo Xirey Siyaasi Xareed Ciise Cumar”
Dahir Hashi Almahri
waxaan idinku hambalyaynayaa sida wanaagsan oo dadaalku ku jiro oo aad dooneysaan in aad dhulkiina
horumar iyo nadaamka ugu sameynaysaan.
Reer Raas Casayr
Faroole isagaa iska qanci doono ama caqliyeeysan doono maalin dhow,ee dadwaynaha Raas Casayr waxaa laga rabaa inay ku taagnaadaan hadafkooda ah in kaa iyo kuwa la mid ah ayan mar kale wax ka dhagaysan waxa qof kastoo ka tirsan Raas casayrna logu gaystay qadiyadan darteedna waa wax sharaf u ah shaqsigaa iyo dadkiisaba,waayo waxaan dhib loo marin ama dhiig ku quban lama helo taasna weligeed bay soo dhici jirtay hadana uguma horeyso.
Mida kale Faroole qadiyadiisa waa dadkan maaweeli kana xoolayso ama ku gaar madaxnimo sare oo taal Mogadisho,siduu u dhagaysta nin rabo inuu wax qabsado nin sidaa u ujeedo yar ee dantiina ka raacda.
Geeridana waxa ay dhibaysaa ninkii dhoof ku yimid.
Aniga waxay fikradeyda ila tahay, haddi aad doonis in aad wax noqoto ama ka baxdo gumeysiga, mamul la’aan iyo horumar la’aan ka jirta dhulka, waa inaad u diyaar arowdaa wax badan o dhib ah ay ka mid tahay Xarig, dil iyo hangabaa arintaas adiga waxaa kaala weyn hadafka guud ee aad u soco noqona doona mid ay mahadiyaa jiilka kaa danbeya.
Horumarku dalka wuxu ku jiraa in helo midnimo, kalsoonaad iyo isfahan iyo ka soonida alle iyo in aad aaminto in aad wax qabsan karto .
ragii halgamey American-African or Black -white sinaantooda maantey waxaa laga dhexlay Barack Obama u noqdo president of America taasi waxay ku timi dadaal lasameys ragka qaarkiis
asc aniga fikirkeyga waxa uu yahay faroole waxa uu rabaa dagaal iyo daan daansi marka uu maalinba maalinta ka danbeysa dad siyaasiyiin ah oo maalin u xiri hada waxey waa dagaal iska cad iyo daandaansi laakinse waxaan u arkaa in ay macnaheeda tahay dagaal baan diyar u ahay mida kale muu ado meesha maamulka ka dhisan yahay muxuu ugu gabanayaa bosaso faroole walee waxaa kuu danbeysa dulinimo